Ntuziaka Blog: My Blog Coach | Martech Zone
Nrụgide na-aga n'ihu! Shonnie Lavendar, Blog Coach, agwala m ka m tinye blog ya - Nchịkọta Blog M: Mee ka usoro mmụta blog dị mfe na onye nchịkwa Shonnie Lavender! Ekpebiri m ịhapụ ma gụọ ụfọdụ na saịtị Shonnie ma enwere m obi ụtọ na m mere!
Ekwetaghị m na enwere nnọchi anya na mgbasa ozi mmekọrịta nke ụmụ nwanyị na ndị pere mpe. Adịghị m nha ohere blogger, naanị m na-eche na ọ bụrụ na anyị ga-amụta ihe n'aka ibe anyị, mgbe ahụ anyị kwesịrị nnọchite anya zuru oke nke ndị folks. Obi dị m ụtọ ịhụ ụmụ nwanyị dịka Shonnie nọ ebe ahụ na ọnụnọ dị ike. Obi dịkwa m ụtọ na òtù dị ka BlogHer gbara gburugburu - nzukọ nke Shonnie na-anọchite anya ya!
Ọ ga-abụ enweghị olileanya m nwere ikwu ihe ọ bụla gbasara ọdịnaya Shonnie. Styledị nke posts, chunking nke ọdịnaya, na ojiji nke obi ike, font, ruturu, blockquotes, mgbọ anatara… cha, niile zuru okè. Aga m eso blọgụ Shonnie iji bulie ndụmọdụ na aghụghọ n’ide ederede ka mma ma gosipụta ya nke ọma.
Ofdị saịtị gị na-amasị m. Ọ bụ mgbe m ruru gị Ihe na peeji nke na m hụrụ àgwà gị n'ezie. Ntinye aka bu ezigbo echiche! Ọ na-egosi ụdị onye mmadụ bụ. Y’oburu n’inweta igu ihe obula, echem na ihe onyonyo bara uru kari otutu posts (doh!). Nke ahụ kwuru, enwere m obere mgbagwoju anya na-ele anya na isi okwu gị. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe nnọchiteanya nke.
Enwere m ụfọdụ Photoshop na onye na-ese ihe nkiri na-atọ ọchị na ego gị! Mee ka m mara ihe ị chere!
Mgbe (Pịa Ka Ihu nha zuru ezu na Budata):
Melite: Shonnie mere nhọrọ ka mma!
M họọrọ ihe oyiyi nke a Bridge dị ka ihe nnọchiteanya nke njem ị ga-ewere gị na-agụ akwụkwọ na. Ejiri m obosara nke ọdịnaya gị mee ka agba na onyonyo pụta ìhè. Nwere ike ịnwale iji tinye aha blog gị karịa nke a karịa n'okpuru ya. Ma, i nwere ike ịbụ na-etinye nke a n'azụ gị na peeji nke taabụ…. na-eche n’olu dara ụda!
Ihe ozo achoputara m bu aha akwukwo bu “Okacha amara iji meziwanye blog gi (n’efu). Iji akara aha dị ka aha peeji dị mma! I nwere ike iso ya “site na Blog Coach, Shonnie Lavendar”. Nke ahụ ga - enyere igwe nchọta aka jikọtara ọdịnaya gị, aha gị, yana agụụ gị!
Have nwere a robots.txt faịlụ na isi nke gị blog ndekọ, blogcoach… ma m na na na na ọ bụghị n'ezie na-enyere gị. Nwere ike itinye faịlụ robots.txt na ntọala nke ndekọ mgbọrọgwụ gị ma hụ na itinye ụzọ na saịtịmap gị na ya:
Have nwere saịtị maapu n'ime akwụkwọ ndekọ aha blọgụ gị kama otu igwe nyocha si achọta ya?!
Ebube ojiji nke ozi ndị metụtara ya na ozi kacha ọhụrụ. M ga-akwado na-agagharị gá »‹ kacha bá »Posts Posts bá» Posts gá »‹ sidebar n'okpuru gá »‹ ndenye aha gi ozi, ezie. Cheta na ọtụtụ ndị folks agaghị ada na ibe obibi gị, ha ga-ahụ otu edemede site na injin nchọta ma dakwasị na otu peeji post gị. Ọ bụrụ n’ile anya n’aka ekpe, imirikiti oge akwụkwọ kacha ọhụrụ gị ga-ada nke ọma n’okpuru ngwụcha nke edemede ahụ. Aga m akwado itinye ya na akara nke ndị ọhụụ.
E wuru isiokwu gị nke ọma. M ga-akwado gị Blog aha na-na h1 isiokwu mkpado, gị posts na-na h2 isiokwu mkpado… na ị fesaa gị subheadings na gị posts na h3 tags. Ọtụtụ ndị ọkachamara SEO kwenyere na Nchọgharị Nchọgharị ga-edepụta dabere na ebe na otu ị si eji akara mkpado! (Mana ha kwenyekwara na h4 nwere obere ma ọ bụ enweghị mmetụta.)
Achọpụtara m ụfọdụ obere mkpụrụ edemede, ọkachasị na sidebar. Agbanyeghi na o dabara adaba, a na m eche ma ndi ọbịa nwere nnukwu mkpebi na nlekota oru nwere ike choro ileba anya iji hu ọdịnaya gi. O juru m anya, ana m echeta mgbe onye ọ bụla na-agbanwe obere mkpụrụ edemede. Ugbu a ana m ahụ ka ha na-agagharị na nnukwu mkpụrụedemede nwere oghere ọcha karịa. Copyblogger bụ ihe atụ pụtara ìhè. Mụ onwe m mere ka mpempe akwụkwọ m dị elu na blọọgụ m yana, agbanyeghị na enweghị m akaebe ọ bụla, ekwenyere m na ọ ka mma saịtị ahụ.
Ndi mmadu na-adi na mpaghara ocha. Okirikiri nhọrọ ukwuu gị na-acha ọcha. Echere m na ọ nwere ike ịba uru ịnwale ụcha ntakịrị agba dị na sidebar gị yana ikekwe imewe ma ọ bụ ndabere na ntanetị gị niile. Naanị nri maka iche echiche! Echeghị m na ọ na-eme ihe ọ bụla iji merụọ blog gị, ọ bụ naanị na ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya na isiokwu gị ma ghara ịkpafu - mgbe ụfọdụ obere esemokwu na agba nwere ike inye aka!
Daalụ maka ohere ahụ dị ịtụnanya. Ọ dị m ka ụkpara na-achọ ịnapụ nkume ahụ n’aka nna m ukwu! Enwere m olileanya na ị nwere ekele maka nzaghachi.
PS: Ọrụ dị jụụ na izipu nri! Nke ahụ ọ bụ ngwa mgbakwunye ka ịdezie faịlụ htaccess gị ka ọ gaa zigara ya FeedBurner na akpaghị aka? Ọ gaara akara m mma ma a sị na m chere banyere nke ahụ!
Tags: onye nchịkwa blogisi ederede blogkpọọ ka emekeonwerobots.txtshonnie lavendarSitemapxml saịtị saịtị
Jul 10, 2007 na 10:54 PM
OMG, Blog Coach ọzọ! Echere m na ọ bụ oge m buliri ọkọlọtọ ọcha wee chọta niche ọzọ.
Ozi gị ka mma Doug nke ọma. Jide nke ọma.
… BB (onye nchịkọta akụkọ nke mbụ 🙂)
Jul 11, 2007 na 9:22 PM
Daalụ BB! I si na gi, oputara otutu !!! Enwere m ekele maka nlebara anya na agbamume ị nyere.
Jul 11, 2007 na 9: 24 AM
Na-akpali mmasị na-agụ, Doug… Na-amasị m karịsịa gị Photoshop nkụnye eji isi mee play na foto nke àkwà mmiri… Ọ bụ ezie na m na-arụ ọrụ 99% nke oge na Adobe Fireworks, M ka na-eme na PS bụkwa nnukwu ngwá ọrụ 🙂
Jul 11, 2007 na 1:02 PM
Obi masịrị gị niile - mana ịza ajụjụ na blọọgụ ndị ọzọ, chaị! You na-ana ego maka nke a? Ikwesiri ime!
Jul 11, 2007 na 2:36 PM
Ọ bụ ntinye ego na ndị na-agụ akwụkwọ, Clive. Ọ na-ewe oge - ma ejiri m n'aka na m ga-akwụ ụgwọ - mana m na-arụ ọrụ iji kpughee mgbasa ozi m.
Ọ na-arụkwa ọrụ!